PressReader - Ilanga: 2018-11-29 - Umhlaba ugubha olwengculaza
Umhlaba ugubha olwengculaza
Bathi umkhankaso wokufundisa ngalesi sifo kumele uqiniswe
Ilanga - 2018-11-29 - Izindaba - BONGINKOSI ZONDI
NGOMSOMBULUKO engosini yethu yezempilo sike sathi janti sixwayisa ngengculaza nesandulela sayo nangokubaluleka kokuba umphakathi ukhumbule ukuthi ingozi yalesi sifo kayikapheli.
Kwelanamuhla sibheka indaba yeWorld Aids Day.
ILANGA lixhumane noMnu Mzamowenkosi Zondi oyisikhulu seTAC KwaZulu-Natal mayelana nokwenzekayo njengamanje ngodaba lwengculaza.
Uthe umphakathi uzoyikhumbula imizamo yabo abayenze ngesikhathi uhulumeni usambozwe yifu lokuphika ukuthi ikhona inkinga ye-AIDS, okuyimpi abayilwe baze bayinqoba enkantolo, okuphoqe uhulumeni ukuba uluqale uhlelo lokunikezela ngemishanguzo, kusizakale umphakathi.
Okwalandela lapho wudaba lokunikezwa imishanguzo kwabesifazane abazithwele ukuze bangadluliseli igciwane kubantwana abangakazalwa.
Kudlule kuleyo nkinga kwaba nenselelo yesayensi phambilini ebithi usizo lwemishanguzo malunikezwe isiguli esine-CD4 count ewu-200 nangaphansi.
Akuwusizanga umphakathi lokho ngoba labo bantu bebephetha ngokuthi isifo sibanqobe badlule emhlabeni. Yona belu isayensi iyenyusile inombolo ye-CD4 yaba wu-350, nalapho okubonakele ukuthi isifo sibhilitile.
UMnu Zondi uthe njengamanje bona njengenhlangano sebefinyelele ezingeni okukhishwa kulona imishanguzo ngesikhathi kutholakala ukuthi umuntu usethelelekile, kungalindwa ukuba kuze kwehle isibalo samasosha omzimba.
Maqondana nezibalo zokutheleleka kwabantu, uthe kuyethusa ngoba kunesimo esingaziwa sokuthi bangaki abathelelwa ngesandulela-ngculaza ngabantu abangekho ohlelweni lokuthola imishanguzo.
Uthe njengamanje KwaZuluNatal kuphela, babalelwa ku-2 million abantu abasohlelweni loku- thola imishanguzo kanti kunenkinga yokuthi abawu-750 000 abebengayitholi ngenxa yesayensi, kakwaziwa ukuthi balidlulisele kwabangaki igciwane ngoba iningi labo vele yintsha.
Uqhubeke wathi bona njengeTAC sebefike eqophelweni lapho uma ohlolwayo kuvela ukuthi unalo igciwane, kungalindwa ukuba isibalo samasosha emzimbeni wakhe sehle njengokusho kwesayensi, kodwa ufakwa ohlelweni lokuthola imithi.
Maqondana nemibiko yokuntuleka kwemishanguzo, uthe okwa- manje iTAC ibisaphumelela ukuyitholela abantu.
Uphethe ngokuvuma ukuthi ukuzinikela kukahulumeni kuyakhombisa ukuthi usulamukele iqiniso ngenhlekelele yengculaza.
Engxoxweni noMnu Zondi, kuyavela ukuthi ingozi isenkulu ngempela futhi kusadingeka ukuba uqiniswe umkhankaso wokuxwayisa abantu ngengozi yengculaza.
Ukufundisa ngezindlela zokuziphatha kuthinta izinhlangothi zokuphila ezahlukene njengoba phakathi kokunye okwenza ingozi ibe nkulu, yizikhathi zobumnandi lapho ukuzibandakanya ocansini olungaphephile kwenzeka kalula.
Okunye futhi yindaba yobudlelwano obungenanhloso yomshado, imvamisa lapho owesilisa ofuna ucansi emdala kumbe enamandla omnotho kunalowo wesifazane asothandweni naye.
Okokugcina, yintsha engafuni ukulalela izeluleko zabadala ngokuziphatha kahle, okuthi ngokungazi kwayo nangokududana igcine iziphonse emlilweni wengculaza, yona nezingane ezizaleka phansi kwaleso simo.
KUGUJWA uSuku lweNgculaza ngomhlaka 1 kwezothwasa.